Nhau - Nhanganyaya kune Zvimwe Zvekudya Giredhi Plastics
Kuongorora Hutano Huzivo rwePP, PC, PS, Tritan Plastiki Mvura Bhodhoro
Mabhodhoro emvura epurasitiki anogona kuonekwa kwese kwese muhupenyu. Mabhodhoro emvura epurasitiki anoshingirira kudonha, ari nyore kutakura, uye anoyevedza pakuonekwa, vanhu vazhinji vanowanzo sarudza mabhodhoro emvura epurasitiki kana vachitenga mabhodhoro emvura. Muchokwadi, vanhu vazhinji havazive izvo zvigadzirwa zvemabhodhoro emvura epurasitiki, uye kazhinji havateerere kune kupatsanura uye kuchengetedzwa kwemidziyo yemabhodhoro emvura, uye kazhinji vanofuratira kuchengetedzeka kwezvinhu zvemabhodhoro emvura.
Zvakajairika zvigadzirwa zvemabhodhoro emvura epurasitiki ndeye Tritan, PP mapurasitiki, PC mapurasitiki, PS epurasitiki. PC ndeye polycarbonate, PP ndeye polypropylene, PS iri polystyrene, uye Tritan chizvarwa chitsva che copolyester zvinhu.
PP ndechimwe chezvinhu epurasitiki zvakachengeteka zvinhu parizvino. Iyo inogona kumira yakanyanya tembiricha uye inogona kupisa mukati meiyo microwave oven. Iyo ine yakanakisa kupisa kupisa, asi haina kusimba, nyore kuputsa, uye ine yakadzika kujekesa.
PC zvinhu zvine bisphenol A, inozoburitswa kana yaiswa pachena pakupisa. Yenguva refu-yekudyara yekuteedzera huwandu hwe bisphenol A inokonzeresa kukuvadza kune hutano hwevanhu. Dzimwe nyika nenzvimbo dzakadzora kana kurambidza PC.
Zvinyorwa zvePS chinhu chakanyatsojeka pachena uye nekukwirisa kwepamusoro. Zviri nyore kupurinda, uye zvinogona kuvezwa zvakasununguka, hazvina hwema, zvisina hunhu, zvisina chepfu, uye hazvikonzeri fungus kukura. Naizvozvo, yakava imwe yeanonyanya kufarirwa epurasitiki zvinhu.
Vagadziri vakatarisana nedzvinyiriro yehutano uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye vari kutsvaga zvinhu zvinogona kutsiva PC.
Mune ino misika kumashure, Eastman weUnited States akagadzira chizvarwa chitsva chekopolyester Tritan. Ndezvipi zvakanakira?
1. Kunaka kwakanaka, kupenya kwechiedza> 90%, haze <1%, ine kubwinya sekristaro, saka bhodhoro reTritan rinobuditsa pachena uye rakajeka segirazi.
2. Panyaya yekushomeka kwemakemikari, zvinhu zveTritan zvinotora mukana wakakwana, saka mabhodhoro eTritan anogona kucheneswa uye akaiswa utachiona nema detergents akasiyana siyana, uye havatye kuora.
3. Iyo haina zvinhu zvinokuvadza uye inosangana nezvinodiwa zvekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye hutano; kuomarara kwakanaka, kwakasimba kukanganisa simba; yakanyanya kupisa kupisa pakati pe 94 ℃ -109 ℃.